၂၀၁၅ ခု မေလ ၃ ရက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးအတွက် အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် MRCCI မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်း ဦးဆောင်သော CEC/EC အဖွဲ့များ…
စင်္ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် စီးပွားရေး အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ
၂၉.၄.၂၀၁၅ နေ့တွင် ကုန်သွယ်မှုကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန်
၂၀၁၅ ခု ဧပြီလ ၂၉ ရက် စင်္ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် JETRO စီးပွားရေးအဖွဲ့သည် ၂၉.၄.၂၀၁၅ နေ့တွင် MRCCI အသင်းသို့ ကုန်သွယ်မှုကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန် MRCCI အသင်းရုံးသို့လာရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ှ JETRO စီးပွားရေးအဖွဲ့အား ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းနှင့်…
တရုတ်နိုင်ငံ မကာအိုမြို့တွင် ပြပွဲများ သွားရောက် ပြသနိုင်ရေး
၄.၅.၂၀၁၅ တွင် MRCCI စည်းဝေးခန်းမ၌ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းသည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၄ ရက် တရုတ်နိုင်ငံ အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မကာအိုမြို့တွင် ပြပွဲများ သွားရောက်ပြသနိုင်ရေးအတွက် ၄.၅.၂၀၁၅ တွင် MRCCI စည်းဝေးခန်းမ၌ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းသည် ကျောက်မျက်ရတနာကုန်သည်များ၊ ပန်းပုပညာရှင်များ၊ ပရိဘောဂ ပညာရှင်များနှင့်…
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက် ၂၇.၄.၂၀၁၅ တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် MRCCI အသင်းသို့ လာရောက်၍ ကုန်သွယ်မှု မြင့်တင်ရေးကိစ္စများအတွက် လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းအပါအ၀င် CEC များ…
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်နှင့် အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးအတွက်
စင်္ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် စီးပွားရေး အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ ၂၉.၄.၂၀၁၅ နေ့တွင် ကုန်သွယ်မှုကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန်
တရုတ်နိုင်ငံ မကာအိုမြို့တွင် ပြပွဲများ သွားရောက် ပြသနိုင်ရေး ၄.၅.၂၀၁၅ တွင် MRCCI စည်းဝေးခန်းမ၌ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းသည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ ကုန်သွယ်မှု မြင့်တင်ရေးကိစ္စများအတွက်
Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry (MRCCI) was founded on 26th of June, 1991 and it has come into existence for 22 years. Currently, there are 2016 members in total and 23 affiliates. . . .
Under Constructio ..... Under Construction.... Under Construction... Under Construction
MRCCI သို့ အသင်းဝင်ရန် အတွက် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ .............. .......... ..........
16-09-2015 Hits:831 ASSOCIATION NEWS
Australian Trade Commission is organ.....
11-09-2015 Hits:1600 GOVERNMENT NEWS
10-05-2015 Hits:1350 MRCCI NEWS
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၄ ရက် တရုတ်နိုင်ငံ အထ.....
08-05-2015 Hits:1842 GOVERNMENT NEWS
၂၀၁၅ ခု မေလ ၃ ရက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သ.....
08-05-2015 Hits:1362 MRCCI NEWS
၂၀၁၅ ခု ဧပြီလ ၂၉ ရက် စင်္ကာပူနိုင်ငံအခြေ.....
08-05-2015 Hits:1655 MRCCI NEWS
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက် .....
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက် ၂၇.၄.၂၀၁၅ တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် MRCCI အသင်းသို့ လာရောက်၍ ကုန်သွယ်မှု မြင့်တင်ရေးကိစ္စများအတွက် လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းအပါအ၀င် CEC များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ မန်စီ မြို့တော်သင်္ကြန်ပွဲသို့ သွားရောက်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆွေးနွေး
၂၀၁၅ ခု ဧပြီလ ၈ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI) မှ အသင်းသူအသင်းသားများသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ..............တွင် ကျင်းပမည့် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် တက်ဟုန်းပြည်နယ် မန်စီ မြို့တော်သင်္ကြန်ပွဲသို့ သွားရောက်ရန်အတွက် ၈.၄.၂၀၁၅ နေ့တွင် MRCCI အသင်းရုံးခန်းမ၌ လိုက်ပါမည့်သူများနှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းမှ စီစဉ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
You don't have such module at your website. Try to check whether you are write down module ID or position of the module. [Incorrect value: 114 ]
၂၀၁၅ ခု ဧပြီလ ၂၉ ရက် စင်္ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် JETRO စီးပွားရေးအဖွဲ့သည် ၂၉.၄.၂၀၁၅ နေ့တွင် MRCCI... Read More...
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၄ ရက် တရုတ်နိုင်ငံ အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မကာအိုမြို့တွင် ပြပွဲများ... Read More...
၂၀၁၅ ခု ဧပြီလ ၈ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့်... Read More...
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှု... Read More...